Mhiret Wolde Mariyam fi Amin Husen Artistoon Oromo Biyya Belgium ti baqatan.
Artistoon Oromoo lama siirna wayyane lagachuun Belgiumn Kolugaltuma gafatan jiru.
Mihret Wolde Mariyam (Haadhaa Shumbee) Amin Hussen
Artist Oromoo beekamtu Mihret Wolde Mariyam (Haadha Shumbee) fi Wallisaa Oromoo birrati jalatama Amin Hussen dhibba siirni wayyanee irran ga’uu baqachuun biyya ba’uuf dirqamuu isaani Belgiumti iyyatan jiru. Artistoon kun siiran wayyane yeero bayee Hidha, dararaama adda adda fi hojiin isaan akka mediati hin banee goochun hamileen isaa xuqamuu isaa biyya baqachuuf dirqaman jiru. Amin Husen Tesson Mootummaa Oromiya Finfinnee irra gara addamati jijiramuu mormudha Oromoo hidhaman tourch ta’aa turan fi mana hidhatii dararama turan kessa isaa tokko.
Yerro ama amoo Fincilaa Didda Garbuma barana Bartooni gegesan Siirba adda gadi dhisun Finicilaa akka babalatu gootan jeedhaman hordoofi gudan isaan irrati godhama jirachuu isaa beekmeera. Mihret Walde Mariyam (Hadha Shumbee) Wayyaa (Ufata) Adda Oromoo Maalatoo ODA qabuu qabu ufachuun yakkamuu isheen Gara Borana adeemte saganta TV irrati dhiyaatu akka hin hojeene uguramte jirti. TV Oromoiya Habashoota Zelalem Jamane fi Abebe jeedhamun Oganamuu Gazeexistoota Oromoo 20 hoji irra kan ari’atee yamuu ta’uu Oromoo qulqulu wara ta’aan TV Oromiyya irra ari’achaa akka jiran beekamee jira. Abebe margiya Artistoon fi Walistoon kamuu ufataa malatoo ODA qabuu ufatani akka waltajii irrati akka hin banee gochuun Oromoo fi ODA gargarii basuun hin danda’muu jeete kan falmatee Mihret Wolde Mariyam Media Oromoo irrati akka ol hin banee ajeejuu isaa irra iyuu Shamaran heeduu waltajii irrati harabsuun akka isaan qaneefatan fi mirga Oromoon qabuu molquu isaa beekamee jira.
Du’aa Alemayoo Atomsa booda TV Oromiyya keessati waan gegefama jiru Adda, Afaan fi Oromummaa bakka itti du’u fi Adda Habashan bakka dagaguu ta’ee jirachuun isaa ifa ba’ee jira. Goochaa kana duba Zelalem Jemaneh, Abebe fi ijoole Habasha OPDO keessa jiraniin yakka dalagama jiru ta’uun hubatamee jira. OPDO keessati yakka hama warii dalaga jira harki caaluu ilman Nafxanyaa Afaan Oromoo dubatanin ta’uu isaa qabatan beekamee jira. Siirni wayyane kana dura Ogannoota Siyyasaa, Hayuulee Oromoo fi Gazeexeesitoota Oromoo dorsisee biyya ari’acha ture yeeroo ama amoo Artistoota Oromoo, Walistoota fi Bareesitotaa Oromoo yakka tokko malee mana hidhatii naquun dararaa waan jiruuf, Harka wayyaneeti kufu irra Ummata jalanuu fi nu jalatuu dhiifnee biyya ba’uuf dirqamne jeechun artsitoon kun gadaan dubatuu. Artistoon Oromoo Kun Addaa, Afaan fi Artii Oromoo gudiisuu irrati gumachaa gudaa kan godhan fi Diraama fi Filimi Oromiyya keessati hojeetama harka caaluu keessati kan hirmatadha fakeenyafi Hoji Mihret Walda Marriyam fi Amin Hussen Keessa Murasa:-
http://www.youtube.com/watch?v=kXxyxV4ZFQA Akka raggati dhiyeesine malee heedutu jira.
Balinan gara fula durati Arstistoota kana dubsuun haqa jiru Oromoo hunda dhageesisuu yaala.